Momba anay - Xingtai Huimao Trading Co., Ltd.
Ary ny mpamatsy amin'ny faritra ialana amin'ny fiara
XINGTAI HUIMAO TRADING CO., LTD dia nivoatra hatramin'ny mpivarotra kojakoja ho an'ny mpamatsy faritra samihafa, mpanondrana. Tena mifaninana ny sisinay
1.Mihoatra ny 20 taona niasan'ny fanamboarana sy fanondranana
2. mpamatsy kojakoja fiara matihanina
3.Ny faritra maromaro an'ny fiara ho an'ny safidy
4.Fanamboarana ampy, fitaovana mandroso ary mpiasa matihanina
5.Fanarahana baiko kely sy isa maromaro izay misy
6.Fandefasana haingana, valiny haingana, kalitao avo lenta. Ireo faritra kely fiara dia ataon'ny mpiara-miasa amin'ny orinasa matihanina miaraka amin'ny fitaovana fanamboarana mandroso.
Mandritra izany fotoana izany ireo injeniera zokinay, mpiasa mahay, fitantanana siantifika dia afaka miantoka ny vokatra tsara kalitao, mpivarotra matihanina sy manan-karena traikefa manondrana dia afaka miantoka ny fizotran'ny varotra iray manontolo.
Ny iraka ampanaovina anay: Ny kalitao voalohany fanompoana voalohany Miorina voalohany amin'ny ampahany vita amin'ny fingotra (tombo-kase, o peratra, gasket fonosana, sandry roimemy), maotera maotera, sivana rivotra, sivana solika, sivana solika, tsipika fitetezana, pad frein, kiraro famaky, fahatairana mpitroka sy faritra hafa misy karazany maherin'ny 50 Ho an'ny maodelin'ny fiara Toyota Honda Nissan BMW VW Audi Mitsubishi Benz KIA Mazda Lexus Great Wall Pickup SUZUKI ISUZU Subaru Hyundai Volvo ... Ny serivisinay A.
Inona ny fe-potoana fandoavam-bola 1 sendika Andrefana 2 T / T B. Inona ny fomba fandefasana anay
1 Express toy ny DHL UPS TNT Fedex (ankafizina ny kaontin'ny mpanjifa). Maharitra 3/4 andro vao tonga any amin'ny toerana aleha.
2 Fandefasana amin'ny rivotra. 4/6 andro vao tonga any amin'ny toeran-kaleha.
3 Fandefasana sy ranomasina. (Fandefasana feno na fandefasana entana).
Afaka mandamina ny fandefasana entana sy ny fadin-tseranana izahay raha mila izany, ary miara-miasa akaiky amin'ny mpandraharaha fandefasana entana izahay izay manome serivisy tonga lafatra sy vidin'ny fifaninanana. Mila maka ny entana ao an-trano fotsiny ianao na amin'ny seranan-tsambo misy anao. C.
Ohatrinona ny haavon'ny vidiny sy ny fotoana fandefasana 1 vidiny antsinjarany (50 PCS eto ambany) 3-5 andro ora fandefasana 2 vidiny ambongadiny (50-499 PCS) 3-5 andro fandefasana 3 vidin'ny lamandy be (500 PCS etsy ambony) 25-35 andro fotoana fandefasana D. Ny hafa Tena hankasitrahana be izahay raha toa ny mpanjifa afaka manolotra isa OEM, maodely fiarakodia ary habetsahan'ny filaminana. Noho izany dia afaka manolotra ny teny nindramina tsara indrindra ho an'ny mpanjifa izahay. Amin'ny alàlan'ny fanavaozana mitohy ny vokatra sy ny haitao ary ny fampidirina amn'ny gadra indostrialy, hihaona amin'ny fitakian'ny mpanjifa amin'ny fomba rehetra izahay, ary lasa mpamatsy vahaolana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao miaraka aminy marika Hamorona ho avy tsaratsara kokoa izahay miaraka amin'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany!
Kaomandy santionany, fanodinana OEM / ODM
Drafitra drafitra famolavolana feno ho an'ny tombo-kase vita amin'ny kofehy sy ampahany ho an'ny vokarin'ny mpanjifa
Raha manana fanontaniana ianao dia mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka na an-tariby ary hiverina any aminao araka izay tratra izahay. Manantena ny hihaino anao izahay.
Piesy detase, Auto Accessory, Groove solika, Fehezo ny bushing arm, Fizarana famehezana, Tombo-kase vita amin'ny landy,